Kaladuwan - Geofumadas
Mawduucyada kale ee geofumadas
ESRI Venezuela oo ay weheliso Edgar Díaz Villarroel oo loogu talagalay Twingeo 6th Edition
Aan ku bilaabo, su’aal aad u fudud. Waa maxay Sirdoonka Goobtu? Goobta Sirdoonka (LI) waxaa lagu gaaraa muuqaalka iyo falanqaynta xogta geospatial si kor loogu qaado fahamka, aqoonta, go'aan qaadashada iyo saadaasha. Adoo kudaraya lakabyada xogta, sida tirakoobka dadweynaha, taraafikada, iyo cimilada, khariidad caqli badan, ururada ...
Robotics macquul ah oo waalan
Laga soo bilaabo naqshadeynta CAD si loo xakameeyo hal software Fuzzy Logic Robotics waxay ku dhawaaqeysaa soo bandhigida nooca ugu horreeya ee Fuzzy Studio ™ ee Hannover Messe Industry 2021, taas oo calaamadeyn doonta meel u roon wax soo saarka robotka jilicsan. ➔ Jiidaya oo ku ridaya qaybo CAD ah mashiinkaaga dijitaalka ah ee 3D ayaa abuuraya ...
Engineering, tabo cusub, dhowr
UNFOLDED: oo ah barxad cusub oo loogu talagalay maaraynta xogta dhulka
Daabacaaddii 6-aad ee Twingeo Magazine, waxaan awoodnay inaan dhadhansiino waxa madal cusub ee loogu talagalay maaraynta xogta durugsan ee ay fidiso Istuudiyaha. Barmaamijkan hal-abuurnimada leh, tan iyo Febraayo 1, 2021, wuxuu dadka ka dhigayay inay ka hadlaan aaladaha suurtagalka ah ee ay siiso maaraynta iyo maaraynta ...
Dareemayaal Fog - 6 Gaarka ah. Daabacaadda TwinGeo
Daabacaaddii lixaad ee majaladda Twingeo waa halkaan, oo hal ku dhiggeedu yahay "Dareemayaal Fog: hanaan edbinta oo isku dayaya in ay isu taagto qaabeynta qaab dhismeedka runta magaalooyinka iyo miyiga". Soo bandhigida codsiyada xogta laga helay dareemayaasha fog, iyo sidoo kale dhammaan dadaalada, aaladaha ama wararka tooska ula xiriira qabashada, ...
Koorsada 'Excel' - tabaha horumarsan ee leh CAD - GIS iyo Macros
AulaGEO waxay keeneysaa koorsadan cusub halkaasoo aad ku baran doonto inaad wax badan ka hesho Excel, oo lagu dabaqay khiyaamooyinka AutoCAD, Google Earth iyo Microstation. Waxaa ka mid ah: Isu-duwaha isku-darka juqraafi ahaan iyo in lagu saadaaliyo UTM, Beddelka isku-darka jajab tobanle illaa darajooyin, daqiiqado iyo ilbiriqsiyo, Isku beddelka isku-duwayaasha fidsan ee masaafada iyo masaafada, U dir Excel illaa Google Earth, ...
Koorsooyinka AulaGEO, dhowr
Koorso Adeegsiga Filmora si aad wax uga beddesho fiidiyowyada
Kani waa koorso wax ku ool ah, sida inaad saaxiib la fariisato oo kuu sheegto sida loo isticmaalo Filmora. Macallinka waqtiga dhabta ah wuxuu muujinayaa sida loo isticmaalo barnaamijka, ikhtiyaarrada ay kuu fidiyaan iyo sida mashruuc loo horumariyo. Filmora waa tifaftire fiidiyoow ah oo qurux badan, fududahay in la isticmaalo, dareen leh oo aad u ...
Koorsooyinka Naqshadeynta Sawirka
Koorsooyinka ArtGEO, dhowr
Geospatial? Waxaan la nimid sharaf weyn iyo qanacsanaanta daabacaadii 4aad ee Twingeo Magazine, waqtigaan oo lagu jiro xiisad caalami ah taas oo, qaarkeed, ay noqotay xoogga dhaqaajiya isbadalada iyo caqabadaha. Xaaladdeenna, waxaan sii wadeynaa inaan baranno - adigoon joojin - dhammaan faa'iidooyinka ay dijitaalka dijital ahi bixiso iyo muhiimadda ...
GRAPHISOFT, hogaamiyaha adduunka ee dhisida xalalka softiweerka ee dhismaha macluumaadka (BIM) ee naqshadayaasha, wuxuu balaariyay helitaanka BIMcloud oo ah adeeg caalami ah si looga caawiyo naqshadayaasha iyo nashqadeeyayaasha inay iska kaashadaan isbedelka maanta ee shaqada guriga Waqtiyadan adag, waxaa si bilaash ah loogu siiyaa 60 maalmood isticmaaleyaasha ARCHICAD iyada oo loo marayo dukaankeeda cusub ee webka. BIMcloud sida ...
Magaalooyinka qarniga 101aad: dhismaha kaabayaasha XNUMX
Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ah baahi guud oo maanta jirta. Waxaan badiyaa ka fikirnaa magaalooyinka caqliga badan ama kuwa dhijitaalka ah macnaha guud ee magaalooyin waaweyn oo leh dad badan oo deggan iyo hawlo badan oo la xiriira magaalooyin waaweyn. Si kastaba ha noqotee, meelaha yaryar ayaa sidoo kale u baahan kaabayaal dhaqaale. Xaqiiqda xaqiiqda ah in dhammaan xuduudaha siyaasadeed aysan ku dhammaan khadka deegaanka, ...
Joomatik iyo Cilmiga Dhulka Sanadkii 2050
Way fududahay in la saadaaliyo waxa dhici doona toddobaad gudihiis; ajendaha sida caadiga ah ayaa la sawiraa, dhacdo ayaa la baajin doonaa muddo dheer waxaana soo bixi doona arrin kale oo aan horay loo sii saadaalin. Saadaalinta waxa dhici kara bil gudaheed iyo xitaa sanadka waxaa badanaa lagu qaabeeyaa qorshe maalgashi iyo kharashyada saddexda biloodba way kala yar yihiin, in kasta oo ay lagama maarmaan tahay in laga tago
BIM cartography Joomatikyada GIS
Koorsada ArcGIS 10 - laga bilaabo xoq
Waxaad jeceshahay GIS, markaa halkan waxaad ka baran kartaa ArcGIS 10 xoqida oo aad ka heli kartaa shahaado. Koorsadan waxaa 100% diyaariyey abuuraha "blog-ka Franz", haddii aad booqatay boggaas waxaad ogaan doontaa in haddii aad baran doontid, haddii kale, sameyn kahor intaadan bilaabin. Waxaa ku jira layliyo iyo buugga: Aasaaska GIS. Haa…
Koorsada QGIS 3 talaabo talaabo talaabo ah lagasoo qaad
Koorsada QGIS 3, waxaan ka bilaabeynaa eber, waxaan si toos ah ugu aadeynaa barta ilaa aan ka gaarno heer dhexdhexaad ah, dhamaadka shahaadada waa la siiyaa Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed ee QGIS, waa koorso loogu talagalay gebi ahaanba qaab wax ku ool ah. Waxay sidoo kale isku daraysaa qayb aragtiyeed oo ugu yar taas oo u oggolaaneysa ardayda inay ku saleeyaan aqoontooda GIS, ...
ArCADia BIM - Beddelka loogu talagalay Soo celinta
[cinwaanka xiga = "ArCADia 10"] Ma u baahanahay farsamada BIM maanta? Ereyga Qaabeynta Qaab dhismeedka Macluumaadka Dhismaha (BIM), sida lagu qeexay Wikipedia, waa tusaale u noqoshada macluumaadka ku saabsan dhismaha iyo dhismayaasha. In kasta oo ereygan uu noqday mid caan ah dhawaanahan, dad badan wali ma fahmin fikraddan si aad u wanaagsan maxaa yeelay ...
Dukaanka internetka ee qaybaha dayactirka baabuurta
Marka waxaad tahay milkiile ku faanay Chrysler? Noocee ah Chrysler adaa leh? Ma Voyager, 300, Neon, PT Cruiser, aragti, Viper, Sebring, Crossfire mise Grand Caravan? Dhammaan gawaarida nooca Mareykanka ee Chrysler waa kuwo gaar ah waxayna bixiyaan ...
Machadka Bentley Press Institute, wuxuu daabacay buugaag aad u tiro badan iyo la tashiyo xirfadeed oo loogu tala galay horumarka BIM ee lagu dabaqay aagag kala duwan sida dhismaha, injineernimada, dhismaha, howlaha, juqraafiga iyo waxbarashada, wuxuu maanta ku dhawaaqay helitaanka oo ah cinwaankeeda cusub, BIM Luqadda Tooska ah, oo hadda la heli karo labadaba ...